အိပ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာစေဖို့ – Gentleman Magazine
ကမ္ဘာကြီးက စိတ်ကူးယဉ်သူတွေနဲ့ ပြည့်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကူးအိပ်မက်နေရုံမဟုတ်ပဲ တကယ်လက်တွေ့ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်သူတွေကို ကမ္ဘာကြီးက ပိုလိုအပ်နေပါတယ်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အိပ်မက်တွေနောက်မှာ ခိုင်မာတဲ့ ယုံကြည်စိတ်နဲ့ အပြင်းအထန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေ ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းလောက်နီးပါးမှာ အံ့မခန်းကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေရှိပေမယ့် ဘာကြောင့် လူနည်းစုကပဲ တကယ်လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တာလဲဆိုတာကို သိပါသလား။ အရင်းအမြစ်တွေ အကန့်အသတ်နဲ့ပဲ ရှိတဲ့သူ၊ ပညာရေးနဲ့ အခြေခံပါရမီနည်းပါးသူတွေအတွက် ကမ္ဘာကြီးကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်မှာပါလဲ။
အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သူနဲ့ ရင်ထဲမှာသိမ်းထားရင်း သေဆုံးသွားသူတွေကြားမှာ ကွဲပြားခြားနားမှု အများကြီးမရှိလှပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ ထူးခြားချက်တွေ ရှိနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး တစ်ဦးချင်းတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာ အတုမရှိတဲ့ ပင်ကိုယ်အရည်အသွေးတွေ၊ စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ ဗီဇစွမ်းအားတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အဓိကကွဲပြားခြားနားသွားစေတဲ့အချက်ကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဝေခွဲမရဖြစ်မနေပါနဲ့။ ကျရှုံးသွားမှာနဲ့ အခြားသူတွေ ဘယ်လိုထင်သွားမလဲဆိုတာကို စိုးရိမ်စိတ်တွေက လုပ်သင့်တာကို မလုပ်ဖြစ်အောင် ဟန့်တားထားနိုင်ပြီး သင့်အိပ်မက်တွေကို လက်တွေ့အကောင်အထည် မဖော်နိုင်အောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုစိုးရိမ်စိတ်တွေက သင့်ရဲ့အဖိုးတန်စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို သေသည်အထိ ဖော်ထုတ်ခွင့်မရအောင် ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကူးအိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။
ဖြစ်အောက်လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်လည်း စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင် နောက်တွန့်မသွားပါနဲ့။ စိတ်ကူးအိပ်မက် ကြီးလေလေ၊ စိန်ခေါ်မှုက ပြင်းထန်လေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အရာမှ ပြီးပြည့်စုံတာ မရှိပါဘူး။ ပြင်ပအခြေအနေတွေကြောင့် စိတ်ဓာတ်မယိုင်သွားပါစေနဲ့။
ဘာလိုအကြောင်းပဲရှိရှိ ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါ။ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက် တကယ်ဖြစ်လာဖို့အတွက် သွေးရော ချွေးရောသာမက မျက်ရည်တွေပါ ရင်းနှီးရနိုင်ချေရှိပါတယ်။ အောင်နိုင်ဖို့ ရပ်တည်နေတယ်လို့ သင့်ကိုယ်သင် ထပ်ကာတလဲလဲ သတိပေးပါ။ ဘာအကြောင်းပဲရှိရှိ ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်စေဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားပေးပါ။ ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိမှသာ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေက လက်တွေ့ဘ၀မှာ အကောင်အထည်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ဘာအကြောင်းပဲရှိရှိ လုပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီလား ????
ကမ်ဘာကွီးက စိတျကူးယဉျသူတှနေဲ့ ပွညျ့နပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စိတျကူးအိပျမကျနရေုံမဟုတျပဲ တကယျလကျတှဆေုံ့းဖွတျလုပျကိုငျသူတှကေို ကမ်ဘာကွီးက ပိုလိုအပျနပေါတယျ။ ကွီးကယျြခမျးနားတဲ့ အိပျမကျတှနေောကျမှာ ခိုငျမာတဲ့ ယုံကွညျစိတျနဲ့ အပွငျးအထနျကွိုးစားအားထုတျမှုတှေ ရှိရမှာဖွဈပါတယျ။
လူတိုငျးလောကျနီးပါးမှာ အံ့မခနျးကွီးကယျြခမျးနားတဲ့ စိတျကူးအိပျမကျတှရှေိပမေယျ့ ဘာကွောငျ့ လူနညျးစုကပဲ တကယျလကျတှအေ့ကောငျအထညျဖျောနိုငျတာလဲဆိုတာကို သိပါသလား။ အရငျးအမွဈတှေ အကနျ့အသတျနဲ့ပဲ ရှိတဲ့သူ၊ ပညာရေးနဲ့ အခွခေံပါရမီနညျးပါးသူတှအေတှကျ ကမ်ဘာကွီးကို ဘယျလိုပွောငျးလဲပဈနိုငျမှာပါလဲ။
အိပျမကျတှကေို အကောငျအထညျဖျောနိုငျသူနဲ့ ရငျထဲမှာသိမျးထားရငျး သဆေုံးသှားသူတှကွေားမှာ ကှဲပွားခွားနားမှု အမြားကွီးမရှိလှပါဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့အားလုံးမှာ ထူးခွားခကျြတှေ ရှိနလေို့ ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့အားလုံး တဈဦးခငျြးတဈယောကျခငျြးစီတိုငျးမှာ အတုမရှိတဲ့ ပငျကိုယျအရညျအသှေးတှေ၊ စှမျးဆောငျရညျတှနေဲ့ ဗီဇစှမျးအားတှေ ရှိကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အဓိကကှဲပွားခွားနားသှားစတေဲ့အခကျြကတော့ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ဖွဈအောငျလုပျမယျလို့ ဆုံးဖွတျနိုငျစှမျးပဲဖွဈပါတယျ။
ဝခှေဲမရဖွဈမနပေါနဲ့။ ကရြှုံးသှားမှာနဲ့ အခွားသူတှေ ဘယျလိုထငျသှားမလဲဆိုတာကို စိုးရိမျစိတျတှကေ လုပျသငျ့တာကို မလုပျဖွဈအောငျ ဟနျ့တားထားနိုငျပွီး သငျ့အိပျမကျတှကေို လကျတှအေ့ကောငျအထညျ မဖျောနိုငျအောငျ လုပျနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုစိုးရိမျစိတျတှကေ သငျ့ရဲ့အဖိုးတနျစိတျကူးအိပျမကျတှကေို သသေညျအထိ ဖျောထုတျခှငျ့မရအောငျ ဖွဈသှားစနေိုငျပါတယျ။ စိတျကူးအိပျမကျကို အကောငျအထညျဖျောပါ။
ဖွဈအောကျလုပျမယျလို့ ဆုံးဖွတျပွီးရငျလညျး စိနျချေါမှုတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရမယျဆိုရငျ နောကျတှနျ့မသှားပါနဲ့။ စိတျကူးအိပျမကျ ကွီးလလေေ၊ စိနျချေါမှုက ပွငျးထနျလလေပေဲဖွဈပါတယျ။ ဘယျအရာမှ ပွီးပွညျ့စုံတာ မရှိပါဘူး။ ပွငျပအခွအေနတှေကွေောငျ့ စိတျဓာတျမယိုငျသှားပါစနေဲ့။
ဘာလိုအကွောငျးပဲရှိရှိ ဖွဈအောငျလုပျဖို့ ဆုံးဖွတျထားပါ။ သငျ့ရဲ့စိတျကူးအိပျမကျ တကယျဖွဈလာဖို့အတှကျ သှေးရော ခြှေးရောသာမက မကျြရညျတှပေါ ရငျးနှီးရနိုငျခရြှေိပါတယျ။ အောငျနိုငျဖို့ ရပျတညျနတေယျလို့ သငျ့ကိုယျသငျ ထပျကာတလဲလဲ သတိပေးပါ။ ဘာအကွောငျးပဲရှိရှိ ရငျဆိုငျကြျောဖွတျနိုငျစဖေို့ ကိုယျ့ကိုယျကို အားပေးပါ။ ဒီလိုစိတျဓာတျမြိုးရှိမှသာ သငျ့ရဲ့စိတျကူးအိပျမကျတှကေ လကျတှဘေ့ဝမှာ အကောငျအထညျပျေါလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
ကဲ ဘာအကွောငျးပဲရှိရှိ လုပျဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈပါပွီလား ????
Previous: လေ့လာသင်ယူသမျှ အမြဲတမ်းမှတ်မိနေစေဖို့ နည်းလမ်း (၄)ခု
Next: အများရှေ့မှာ စကားပြောနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း(၃)ခု